Dooda dhaqamada iyo Yurub | Somaliska
Isbuucyadii ugu dambeeyay waxaa Yurub ka dhalatay dood cusub oo ay furtay Jansilarka Germalka Angela Merkel taasoo ay ku sheegtay in fikrada wada noolaashaha dhaqamada kala duwan ay burburtay ayadoo ugu baaqday Muslimiinta germalka ku nool in ay qaataan dhaqanka wadanka ee ku dhisan demoqraatiyada iyo Kiristaanka. Dhowr isbuuc ka dib hadalkii Merkel ayaa dooda waxaa sidoo kale ku soo biiray raysal Wasaaraha Ingiriiska David Cameron asagoo sheegay in waxa loo yaqaan "Multicultralism" ee ku salaysan in qofkasta dhaqankiisa uu haysto ay burburtay oo bulshada caadaanka ah ee reer Ingiriis loo baahanyahay in wadadooda la qaado asagoo Muslimiinta si gaar ah u doortay in uu ka hadlo iyo waxyaabaha uu ugu yeero xagjirnimada. Dhowr maalmood ka dib dooda waxaa asna dhiniciisa ka soo galay madaxweynaha Faransiiska Nicolas Sarkozy oo lagu yaqaan in uu yahay dameeri dhaan raacday asagoo ku hadlay hadal u dhow kii Merkel ugana baaqay Muslimiinta in ay qaataan dhaqanka Faransiiska. Hadaba doodaan cusub ee ka taagan waxa loo yaqaan Multicultralism ama fikirka ah in dhaqamada kala duwan ay wada noolaadaan ayaa u muuqata mid ku salaysan siyaasad ayadoo madaxda Yurub ay u muuqdaan in ay difaac kaga jiraan xisbiyada xagjirka ah oo ay doonayaan in neceybka loo qabo Muslimiinta ay qeybtooda ka qaataan si ay doorashada mar kale ugu guuleystaan. Dooda Multicultralism-ka ayaan ku dhisnayn Muslimiinta oo keliya balse waxaa Muuqata in madaxda Yurub ay doorteen in si gaar ah ay u weeraraan Muslimiinta kuwaasoo hada noqday kuwo qofkasta neceybkiisa kula dhaco oo waxkasta oo xun loo hibeeyo. Markaad aqriso qeybaha kala duwan ee internetka ee dadku ay ku sheegeystaan ayaad dareemeysaa inta uu le'egyahay neceybka iyo xasidnimada loo qabo Muslimiinta. Wadankaan Sweden ayaa ah midka ugu xushmada badan dhaqamada kala duwan balse iyaga xitaa hada way soo gaartay dooda Multicultralism ayadoo ka dib soo galitaankii xisbiga Cunsuriga SD ee baarlamaanka Sweden ay aad u siyaaday neceybka loo qabo Muslimiinta ayadoo la filayo neceybka iyo takoorka lagu hayo Muslimiinta in uu siyaadi doono sanadaha soo socda. Soomaalida ayaa qaasatan hada noqatay bartilmaameedka cusub ee cunsuriyiinta oo tusaale loo soo qaado fashilka ku yimid Multiculturalism ama waxa kale ee loo yaqaan Integration-ka, markaad aqriso wargeysyada kala duwan ee ka soo baxa reer galbeedka iyo fikradaha dadka caadiga ah ay ku qoraan internetka ayay u muuqataa in Soomaalidu ay hada yihiin bartilmaameedka cusub oo ay yihiin dadka farta lagu fiiqo markii laga hadlayo xumaanta soo galootiga.
Isbuucyadii ugu dambeeyay waxaa Yurub ka dhalatay dood cusub oo ay furtay Jansilarka Germalka Angela Merkel taasoo ay ku sheegtay in fikrada wada noolaashaha dhaqamada kala duwan ay burburtay ayadoo ugu baaqday Muslimiinta germalka ku nool in ay qaataan dhaqanka wadanka ee ku dhisan demoqraatiyada iyo Kiristaanka.
Dhowr isbuuc ka dib hadalkii Merkel ayaa dooda waxaa sidoo kale ku soo biiray raysal Wasaaraha Ingiriiska David Cameron asagoo sheegay in waxa loo yaqaan “Multicultralism” ee ku salaysan in qofkasta dhaqankiisa uu haysto ay burburtay oo bulshada caadaanka ah ee reer Ingiriis loo baahanyahay in wadadooda la qaado asagoo Muslimiinta si gaar ah u doortay in uu ka hadlo iyo waxyaabaha uu ugu yeero xagjirnimada.
Dhowr maalmood ka dib dooda waxaa asna dhiniciisa ka soo galay madaxweynaha Faransiiska Nicolas Sarkozy oo lagu yaqaan in uu yahay dameeri dhaan raacday asagoo ku hadlay hadal u dhow kii Merkel ugana baaqay Muslimiinta in ay qaataan dhaqanka Faransiiska.
Hadaba doodaan cusub ee ka taagan waxa loo yaqaan Multicultralism ama fikirka ah in dhaqamada kala duwan ay wada noolaadaan ayaa u muuqata mid ku salaysan siyaasad ayadoo madaxda Yurub ay u muuqdaan in ay difaac kaga jiraan xisbiyada xagjirka ah oo ay doonayaan in neceybka loo qabo Muslimiinta ay qeybtooda ka qaataan si ay doorashada mar kale ugu guuleystaan.
Dooda Multicultralism-ka ayaan ku dhisnayn Muslimiinta oo keliya balse waxaa Muuqata in madaxda Yurub ay doorteen in si gaar ah ay u weeraraan Muslimiinta kuwaasoo hada noqday kuwo qofkasta neceybkiisa kula dhaco oo waxkasta oo xun loo hibeeyo. Markaad aqriso qeybaha kala duwan ee internetka ee dadku ay ku sheegeystaan ayaad dareemeysaa inta uu le’egyahay neceybka iyo xasidnimada loo qabo Muslimiinta.
Wadankaan Sweden ayaa ah midka ugu xushmada badan dhaqamada kala duwan balse iyaga xitaa hada way soo gaartay dooda Multicultralism ayadoo ka dib soo galitaankii xisbiga Cunsuriga SD ee baarlamaanka Sweden ay aad u siyaaday neceybka loo qabo Muslimiinta ayadoo la filayo neceybka iyo takoorka lagu hayo Muslimiinta in uu siyaadi doono sanadaha soo socda.
Soomaalida ayaa qaasatan hada noqatay bartilmaameedka cusub ee cunsuriyiinta oo tusaale loo soo qaado fashilka ku yimid Multiculturalism ama waxa kale ee loo yaqaan Integration-ka, markaad aqriso wargeysyada kala duwan ee ka soo baxa reer galbeedka iyo fikradaha dadka caadiga ah ay ku qoraan internetka ayay u muuqataa in Soomaalidu ay hada yihiin bartilmaameedka cusub oo ay yihiin dadka farta lagu fiiqo markii laga hadlayo xumaanta soo galootiga.
Shil tareen oo maanta gelinkii dambe ka dhacay magaaladda Göteborg